थाहा पाउनुहाेस् तपाईँकाे राशिफल सोमबार, पुस ५, २०७८
कसरी जोडिन सकिन्छ वास्तविक जीवनसँग ? आइतबार, पुस ४, २०७८
आज पिपलमा जल चढाउनु उत्तम, थाहा पाउनुहाेस् तपाईँकाे राशिफल शनिबार, पुस ३, २०७८
थाहा पाउनुहाेस् तपाईँकाे आजको राशिफल आज २ पुस, १७ डिसेम्बर । शुक्रबार । मार्गशीर्ष शुक्लपक्ष चतुर्दशी, कृतिका नक्षत्र, सिद्ध योग, चन्द्रमा वृष राशिमा । आज सूर्योदय बिहान ६ः४९ मा हुनेछ भने सूर्यास्त १७ः१० मा हुनेछ । शुक्रबार, पुस २, २०७८
साँचो प्रेमको अर्थ के हो ? तपाईं प्रेममा पग्लिनुपर्छ, किनकि तपाईं जो हो, त्यसको केही अंश नष्ट हुनुपर्छ । तपाईंको सम्पूर्ण हिस्सा नगएपनि, कम्तीमा तपाईंको एउटा अंश समाप्त हुनैपर्छ । तबमात्र त्यहाँ प्रेम सम्बन्ध हुन्छ । तपाईं अर्काको निम्ति आफ्नो केही अंश नष्ट गर्न इच्छुक रहनुपर्छ । बिहीबार, पुस १, २०७८
हिउँले मनाङका डाँडाकाँडा सेताम्य, माथिल्लाे क्षेत्र नजान पर्यटकलाई अनुराेध हिमाली जिल्ला मनाङका डाँडाकाँडा हिउँले सेताम्य बनेका छन् । माथिल्लो मनाङ र नार्पाभूमिका बस्तीमा बिहीबारदेखि हिमपात भइरहेको स्थानीयले बताएका छन् । शनिबार, मंसिर १८, २०७८
थाहा पाउनुहाेस् तपाईँकाे राशिफल आजको पात्रो : १६ मंसिर, बिहीबार । २ डिसेम्बर । मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष त्रयोदशी तिथि, स्वाती नक्षत्र, शोभन योग, चन्द्रमा तुला राशिमा छ । बिहीबार, मंसिर १६, २०७८
मेष राशी भएकालाई आज आकस्मिक अर्थलाभ हुने, तुलालाई चन्द्रमाकाे साथ आजको पात्रो : १५ मंसिर, बुधबार । तद्अनुसार १ डिसेम्बर । मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष द्वादशी तिथि, चित्रा नक्षत्र, सौभाग्य योग, चन्द्रमा तुला राशिमा छ । आज सूर्योदय बिहान ६ः३८ मिनेटमा र सूर्यास्त पाँच बजेर ६ मिनेटमा हुनेछ । बुधबार, मंसिर १५, २०७८
आज एकादशी, थाहा पाउनुहाेस् तपाईँकाे राशिफल आजको पात्रो : १४ मंसिर मंगलबार, तद्नुसार ३० नोभेम्बर । मार्गशीर्ष कृष्णपक्ष एकादशी, आजको एकादशीलाई उत्पत्तिका एकादशी भनिन्छ । मंगलबार, मंसिर १४, २०७८
मेष राशिलाई राेजगारीमा नयाँ सफलता, कर्कटलाई चन्द्रमाको साथ आज बिहान १०ः३० देखि राहुकाल सुरु भएर ११ः५२ को समयमा सकिने छ । अभिजित मुहूर्तको समय ११ः३१ देखि १२ः१३ सम्म रहेको छ । शुक्रबार, मंसिर १०, २०७८
बेहुलीका लागि ब्युटी टिप्स विवाहको अवसर जति सुखद् र रोमाञ्चक हुन्छ उत्तिकै तनावपूर्ण पनि । जसको सीधा सम्बन्ध सुन्दरतासँग हुन्छ । यस्तोमा विवाहको विशेष अवसरमा आफ्नो सुन्दरतामा निखार ल्याउन केही घरेलु उपाय अपनाउनु लाभदायक हुन्छ । सोमबार, मंसिर २२, २०७७
वास्तु ज्ञान : आग्नेय कोणमा के राख्ने, के नराख्ने ? वास्तुले मध्यस्थानलाई एउटा आधार मानेर पूर्वदिशा, आग्नेय, दक्षिण, नैऋत्य, पश्चिम, वायव्य, उत्तर, ईशान दिशालाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने भनेर उल्लेख गरेको छ । शनिबार, कात्तिक २२, २०७७